Efa misy ny GNOME 42, miaraka amin'ny fitaovana fisamborana vaovao, ankoatra ny hafa | ubunlog
Efa misy ny GNOME 42, miaraka amin'ny fitaovana fisamborana vaovao, fanatsarana ny fomba maizina ary ireo endri-javatra vaovao hafa
Mijery ny arisiva hamoahana ny lahatsoratra momba ny Ity herinandro ity ao amin'ny GNOME, Gaga aho fa mbola tsy namoaka ilay famotsorana lehibe nitranga tamin'ny tapaky ny herinandro ity izahay: GNOME 42 Efa misy izany ankehitriny. Tonga miaraka amina endri-javatra vaovao maro izy io, saingy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia niresaka betsaka momba ny fitaovana pikantsary vaovao izy ireo ka toa io no zava-baovao miavaka indrindra. Mazava ho azy fa mihoatra lavitra noho ny GNOME Shell Screen Recorder, ankoatry ny zavatra hafa satria izy io dia iray manontolo: ahafahanao maka pikantsary (sary) amin'ny efijery, fa koa manoratra ny desktop. Ary amin'ny fitaovana iray izay nanatsara be ny famolavolana azy.
Saingy, na firy na firy ny rindrambaiko vaovao entin'izy ireo dia tsy misy ilana azy raha misy zavatra miharatsy. Ny tiako lazaina fampisehoana, zavatra izay nohatsaraina ihany koa miaraka amin'ny fahatongavan'ny GNOME 42. Ary io desktop malaza io dia nihatsara be tamin'ny dikan-teny vao haingana, miaraka amin'ny GNOME 40 sy ny fihetsehan'ny tontonana mikasika azy, nanatsara ny fampisehoana amin'ny v41 ary miaraka amin'ny fanodinkodinana bebe kokoa amin'ny dikan-teny farany. Ny GNOME 42 dia famotsorana lehibe, satria toa ny fiafaran'ny zavatra natombony tamin'ny herintaona lasa izay.
Hevitra misongadina ao amin'ny GNOME 42
Ho an'ireo izay tia sary noho ny teny, namoaka lahatsary ho toy ny tranofiara na fanambarana ny tetikasa miaraka amin'ireo endri-javatra vaovao manan-danja indrindra izay niaraka tamin'ity dikan-teny ity.
Fanatsarana ny maody maizina. Misy sehatra vaovao ary azo ampiasaina hangatahana fampiharana hampiasa ny interface maizina fa tsy ny mazava. Ny fiaviana ofisialy rehetra dia manohana ny maody maizina. "System wide" izany, izany hoe ho an'ny rafitra manontolo.
Fitaovana pikantsary vaovao, izay ahafahanao mirakitra ny biraonao. Ny fanokafana azy dia tsotra toy ny fanindriana ny fanalahidy Pirinty natao pirinty, ary amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika ny interface vaovao sy ny safidy vaovao. Manana hitsin-dàlana fitendry handeha haingana kokoa izy io:
S : Mifidiana faritra iray.
W : Maka varavarankely.
V : écran écran / firaketana an-tsoratra.
C : maka pikantsary.
P : Asehoy na afeno ny tondro.
Intro / spacebar / Ctrl + C : fisamborana.
Fampiharana vaovao amin'ny alàlan'ny default. Fampiharana roa no nampidirina tao amin'ny GNOME 42 izay atolotry ny tetikasa hampiasaina. Ny iray amin'izy ireo dia ny Text Editor (tonian-dahatsoratra), izay hisolo ny Gedit ankehitriny. Ny fampiasana azy na tsia dia miankina amin'ny fizarana, na amintsika raha manapa-kevitra ny hiova isika. Ny iray hafa dia Console, fampiharana vaovao ho an'ny terminal. Izy io dia manana interface tsara kokoa tafiditra ao amin'ny GNOME, ary tsotra satria ity tetikasa ity ihany no mahavita azy.
Fanatsarana ny fampisehoana, noho ny zavatra toy ny:
Nivadika tamin'ny fampiasana widgets OpenGL miaraka amin'ny decoding accelerated hardware ny app video.
Ny fanondroana rakitra ao amin'ny Tracker dia nohatsaraina be, miaraka amin'ny fanombohana haingana kokoa sy fampihenana ny fampiasana fahatsiarovana.
Nihatsara be ihany koa ny fikirakirana ny fampidirana, nampidina ny elanelam-potoana ary nanatsara ny fandraisana andraikitra rehefa feno ny rafitra. Izany dia hahasoa indrindra amin'ny lalao sy fampiharana izay mitaky hozatra sary.
Ny navigateur web an'ny GNOME dia afaka mamadika pejy miaraka amin'ny fanafainganana ny fitaovana.
Nohatsaraina ny fomba famoahan'ny fampiharana ecran feno, mampiasa fahatsiarovana kely kokoa rehefa mijery horonan-tsary na milalao lalao.
Fihetseham-po amin'ny kosmetika rehetra.
Ny rindranasa Files (Nautilus) izao dia manana tsipika lalan-drindrina, misy zavatra novana anarana, ary nohavaozina ireo kisary.
Ny GNOME Boxes dia manana fomba fijery safidin'ny fanavaozana ary fanohanana tsara kokoa ho an'ny rafitra UEFI.
Ao amin'ny horonan-tsary, azo fehezina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso media ao amin'ny lisitry ny fampahafantarana ny playback.
Ny GNOME 42 dia navoaka ny 23 martsa lasa teo, noho izany dia tokony ho tonga amin'ny rafitra toa ny Arch Linux. ho ny desktop ampiasaina amin'ny Ubuntu 22.04, ary efa beta amin'ny Daily Live an'i Jammy Jellyfish.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » GNOME » Efa misy ny GNOME 42, miaraka amin'ny fitaovana fisamborana vaovao, fanatsarana ny fomba maizina ary ireo endri-javatra vaovao hafa
Tsy ny 23 martsa ve izany, sa ny 23 aprily 2021? Satria tsy fantatro fa nivoaka tamin'ny taon-dasa ity fanavaozana ity dia tsy tonga saina aho.
Tonga ny dikan-dav1d 1.0.0 vaovao, ny decoder AV1 novolavolain'i VideoLAN
GNOME dia mankalaza ny famoahana ny GNOME 42 amin'ny vaovao amin'ity herinandro ity